ရဲရင့်ခေါင်းဆောင်မှု — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဤတွင် display ကိုအပေါ် MLK ရဲ့ရဲရင့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ (အစဉ်အမြဲငါဖတ်ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးအရေးအသားအချို့ကိုဖော်ပြခြင်းမ). သူကမတရားတဲ့ဥပဒေတွေဘက်ယမ်းငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ဆိုင်းရန်ငြင်းဆန်. သူကလူဦးတစ်ခုလုံးယှဉ်ပြိုင်ကိုယ်စားအပေါ်ပဏာမခြေလှမ်းကြာ. အနက်ရောင်သောသူကဲ့သို့, သူ့ကိုငါကတဆင့်ပွီးမွောကျအလုပျအတှကျဘုရားသခငျအားနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်. ထိုအခါခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်, ကိုယ့်အဖြစ်ခက်သူပြုသကဲ့သို့တရားမျှတမှုအတွက်စစ်တိုက်ချင်, သာသညျယရှေုစုံလင်သောတရားမျှတမှုကိုဆောင်ကြဉ်းနိုင်မစိတျထဲတှငျစောငျ့ရှော. ထိုလိမ့်မည်.
ဒီ MLK ရဲ့နာမည်ကျော်စာတစ်စောင်မှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအခွင့်အလမ်းရလာသောအခါသငျသညျတပြင်လုံးကိုအရာဖတ်သင့်.
"ကျနော်တို့ထက်ပိုပြီးအဘို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြ 340 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးထားအခြေခံဥပဒေနှင့်ဘုရားသခင်အခွင့်အရေးအတွက်အနှစ်. အာရှနှင့်အာဖရိက၏လူမျိုးတို့သည်နိုင်ငံရေးအရလွတ်လပ်ရေးရရှိမှုအပျေါအ jetlike မြန်နှုန်းနှင့်အတူရွေ့လျားနေကြသည်, ငါတို့မူကားဆဲနေ့လယ်စာကောင်တာမှာကော်ဖီခွက်ရရှိမှုဆီသို့မြင်းနှင့်ယုန်ကလေးအရှိန်အဟုန်မှာတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်. အသားအရောင်ခွဲခြား၏လက်နက်လှံလက်နက်ခံစားခဲ့ရဖူးဘူးသောသူတို့အပြောအဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကလွယ်ကူသည်, "။ စောင့်ပါ" ဒါပေမယ့်သင်အလိုတော်မှာဆိုးအုပ်စုများ Lynch ကသင်၏မိခင်နှင့်ဘိုးဘေးတို့မြင်ကြပြီအခါထငျမှာညီအစ်မတို့၏ညီအစ်ကိုတို့နှင့်ရေနစ်; သငျသညျအမုန်းတရားကိုဖြည့်ရဲကျိန်စာမြင်ကြပြီအခါ,, ကန်နှင့်ပင်သင့်ရဲ့အနက်ရောင်ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေကိုသတ်; သင်တစ်ဦးချမ်းသာကြွယ်ဝလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အလယ်၌ဆင်းရဲမွဲတေမှုတစ်လုံလှောင်အိမ်ထဲမှာ smothering သင့်ရဲ့နှစ်ဆယ်သန်း Negro ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်အများစုမြင်သောအခါ; သငျသညျသူမပဲရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာကြော်ငြာခဲ့ကြောင်းအများပြည်သူအပန်းဖြေပန်းခြံမှမသှားနိုငျဘာကြောင့်သင့်ရဲ့ခြောက်ခုနှစ်အရွယ်သတို့သမီးအားရှင်းပြဖို့အရပ်ကိုရှာသကဲ့သို့သင်တို့ရုတ်တရက်သင်၏လျှာလိမ်နှင့်သင်၏မိန့်ခွန်း stammering တွေ့သောအခါ, သူမ Funtown ရောင်စုံကလေးတွေကိုတံခါးပိတ်ကြောင်းပြောလာသောအခါမျက်ရည်သူမ၏မျက်စိ၌တက်နေရင်းမြင်, နှင့်သူမ၏နည်းနည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိုဃ်းကောင်းကင်၌ဖွဲ့စည်းရန်စတင်ညံ့လို့၏နိမိတျဆိုးမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးမြင်, အဖြူနှင့်လူများရှေ့သို့တစ်ဦးသတိလစ်မေ့မျောခါးသီးမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးအားဖွငျ့သူမ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှောက်လှန်ရန်သူမ၏အစအဦးကိုတွေ့မြင်; သငျသညျတောငျးဆိုသူတစ်ဦးငါးနှစ်အရွယ်သားအဘို့အဖြေတစ်ခုဖွဲ့အစီအမံရန်ရှိသည်အခါ,: "Daddy, အဘယ်ကြောင့်အဖြူလူရောင်စုံလူဒါသာမညပြုမူဆက်ဆံကြပါ?"; အဘယ်သူမျှမမိုတယ်သင်တို့လက်ခံလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်ခရိုင် drive ကိုယူနှင့်ကလိုအပ်သောသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များ၏မသက်မသာထောင့်၌တညဉျ့ပြီးနောက်ညဥ့်အခါအိပ်ကိုတွေ့သောအခါ; သငျသညျ "အဖြူ" နှင့် "ရောင်စုံ" စာဖတ်ခြင်းချင်နေကြတဲ့အရိပ်လက္ခဏာအားဖြင့်ထွက်ရှိသောနေ့ရက်အရှက်နှင့်နေ့ရက်ကိုကြသောအခါ; သင်ပထမဦးဆုံးနာမည် "nigger ဖြစ်လာသည့်အခါ,"လူကလေး" သင်၏အလယ်နာမည်ဖြစ်လာသည် " (သို့သော်ဟောင်းသင်) နှင့်သင်၏နောက်ဆုံးအမည် "ယောဟနျဖြစ်လာ,မစ္စစ် "" နှင့်သင့်ဇနီးနှင့်မိခင်အလေးစားခေါင်းစဉ်ပေးထားဘယ်တော့မှနေကြတယ် "; သငျသညျနေ့ harried နှင့်သင်တစ်ဦး Negro ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ညဉ့်အခါသရဲခြောက်တယ်လို့ကြသောအခါ, tiptoe ရပ်တည်ချက်မှာအဆက်မပြတ်နေထိုင်သော, အတော်လေးလာမည့်မျှော်လင့်မှုအရာကိုမသိဘဲဘယ်တော့မှ, နှင့်အတွင်းစိုးရိမ်မှုများနှင့်ပြင်မကျေနပ်မှုနှင့်အတူအနှောငျ့အရှ; ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲစောင့်ဆိုင်းရန်ရှာတွေ့သင်သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ကြလိမ့်မည် -then သငျသညျအစဉျအမွဲ "ဘယ်သူမှ" ၏တစ်ဦးသမ္မတကတော်သဘောတိုက်ခိုက်နေကြသောအခါ. သည်းခံခြင်းကိုပွားများ၏ခွက်ကိုကျော်ပြေးတဲ့အခါအချိန်အဲဒီမှာလာ, နှင့်ယောက်ျားမရှိတော့စိတ်ပျက်အားငယ်၏အနက်ဆုံးသောတွင်းသို့ထိုးခံရဖို့လိုလိုလားလားရှိ. ငါမျှော်လင့်တယ်, ချင်းတို့, သင်တို့သည်ငါတို့၏တရားဝင်နှင့်လွှဲမရှောင်သာစိတ်မရှည်နားလညျနိုငျ. သငျသညျဥပဒေတွေကိုချိုးဖျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို. ဤသည်ဆက်ဆက်တရားဝင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်စေ့စေ့၏တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနာခံဖို့လူတွေကိုတိုက်တွန်းကတည်းက 1954 အများပြည်သူကျောင်းများတွင်မှုပိတ်ပင်အသားအရောင်ခွဲခြား, ပထမတစ်ချက်မှာဥပဒေတွေကိုချိုးဖျက်ဖို့သတိရှိရှိသည်ငါတို့အဘို့မဟုတ်ဘဲဝိရောဓိထင်ရစေခြင်းငှါ. တစျခုမှာကောင်းစွာမေးမြန်းစေခြင်းငှါ: "ခင်ဗျားဘယ်လိုအခြို့သောဥပဒေများခြိုးဖောကျနှငျ့အခွားသူမြားကိုနာခံထောက်ခံနိုင်?"ဒီအဖြေကိုဥပဒေများကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်: ရုံနှင့်မတရားတဲ့. ကိုယ့်ဥပဒေတွေနာခံထောက်ခံမှပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်. တစ်ခုမှာတရားဝင်ပေမယ့်ကိုယ့်ဥပဒေတွေကိုနာခံဖို့တခုကငျြ့ဝတျတာဝန်မသာရှိပါတယ်. ပြောင်းပြန်, တဦးတည်းမတရားတဲ့ဥပဒေတွေစကားနားမထောင်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတာဝန်ရှိပါတယ်. ငါစိန့်နှင့်အတူသဘောတူမယ်လို့. တစ်ဦးမတရားတဲ့တရားအားလုံးမရှိပညတ်တရားပေတည်း "ဟုသြဂတ်."
-Martin Luther King Jr က, တစ်ဦးဘာမင်ဂမ်ထောင်ထံမှပေးစာ
BornWithPurpose • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
-မာတင်လူသာကင်း Jr က.
Sean • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်